Kwindawo enezilwanyana ekufuphi eSun City iBakgatla Resort
Indawo yokuTyelela iBakgatla Resort
I-Pilanesberg National Park,- ese Sun City, eMzantsi Afrika
Kwindawo enezilwanyana ekufuphi eSun City iBakgatla Resort, iindwendwe zingabona ezona zilwanyana zinkulu ezintlanu zeli, kunye nasiphi na isilwanyana salapha Emazantsi we Afrika esizitho zine ePilanesberg National Park.
Iindawo enemibono emihle, kuninzi onokuthi ukwenze kunye nokungena iinkomfa
Indawo yokuhlala ezi chalets kunye neentente ezinkulu
Ukubukela izilwanyana kwindawo yazo ekufuphi eSun City (imizuzu engama 20 umgama)
Uqhuba iiyure ezimbini (2) ukuya kwindawo yokutyelela iBakgatla xa usuka eRhawutini
Iindwendwe ezityelele eBakgatha Resort ziye zifumane ithuba lokubukela izilwanyana nezinye izinto abonokuthi bazenze ukuzonwabisa kumzi wezilwanyana okufuphi eSun City. I-Pilanesberg National Park ayinaso isifo sika Malaleveva (Malaria) ikwi sizikithi sendawo eyatshatyalaliswa yinyikima yomhlaba, yenye yendawo ezintathu kuphela elizweni ekwathi kwenzeka izangqa sisenziwa ngumlilo omkhulu owaziwa njenge volcano.
Ifumaneka kum-mndla onemiboniso we Bonjalo okwi phondo lase North West, ePilanesberg National Park eyathi yachazwa ngonyaka ka 1979 kwaye yogquma indawo engange 55 000 ye hektare. Ukusuka eBakgatla, abatyeleli bangasingisa kuhambo ngesithuthi bebuka izilwanyana kwindawo yazo, uhambo ngenyawo kunye ne bhaluni ezibhabha phezulu kwindawo enezilwanyana phezu kokunye abanokuthi bakwenze njengo sapho.
I-Pilanesberg National Park iinenduli ezininzi, iindawo ezinzulu ezenziwe ngama planga kunye nengca, zonke ezi zenza umbono omhle kakhulu. Lendawo yendalo intle ilikhaya kwizilwanyana ezingapha kwe 35 ezizitho zine, ezinkulu, kuquka ezintlanu ezithandwayo kweli ezinkulu kakhulu kunye neentlobo zeentaka ezingapha kwama 300.
Indawo engumgxuma one alkaline yathi yenzeka ngokuthi kwenzeka unyikimo mhlaba kwiminyaka engama 1300 yezigidi zeminyaka eyadlulayo. Esizikithini salo mngxuma kukho ichibi elikhulu apho ke umhlaba nendlela ezintle kakhulu ziqala khona. Iintlobo zamatye amahle angaqhelekanga kunye nendawo ezenziwe ngawo enza lomgxuma ibeyindawo efana yodwa eyenziwe ngamatye. Iintlobo ezigqamileyo ngombala, iindawo ezohlukeneyo kunye nemibono phezulu ezintabeni ziyakuthi zonwabise abatyeleli kunye nabafoti.